Iimpawu eziphambili kwi DataNumen Outlook Repair v8.5
Ungafaka igama lefayile yePST ngokuthe ngqo okanye ucofe i iqhosha lokukhangela kwaye ukhethe ifayile. Unokucofa kwakhona iqhosha lokufumana ifayile ye-PST ukuba ilungiswe kwikhompyuter yendawo.
Ukuba uyazi inguqulelo ye-Outlook yemvelaphi yefayile yePST eza kulungiswa, unokuyichaza kwibhokisi ye combo Ngaphandle kwebhokisi yokuhlela ifayile, iifomathi ezinokubakho zi-Outlook 97-2002, Outlook 2003-2010, Outlook 2013-2019 / Office 365 PST file and Outlook 2013-2019 / Office 365 OST ifayile. Ukuba ushiya ifomathi njengo "Zinqume ngokuzenzekelayo", emva koko DataNumen Outlook Repair izakuskena ifayile yePST ukuba imisele ifomati yayo ngokuzenzekelayo. Nangona kunjalo, oku kuya kuthatha ixesha elongezelelweyo.
Unokukhetha ifomathi yefayile yePST emiselweyo kwibhokisi yokudibanisa ecaleni kwebhokisi yokuhlela yefayile esisigxina, iifomathi ezinokubakho zi-Outlook 97-2002 kunye ne-Outlook 2003-2019 / iOfisi 365. Ukuba ushiya ifomathi njengo "Ukuzimisela okuzenzekelayo", emva koko DataNumen Outlook Repair iya kuvelisa ifayile ye-PST emiselweyo ehambelana ne-Outlook efakwe kwikhompyuter yendawo.
nqakraza i iqhosha, kwaye DataNumen Outlook Repair Ndiza start ukuskena nokulungisa ifayile yePST. Inkqubela phambili bar